Ajjeechaan Suukkanneessan Godina Matakkal Aanaa Dibaat jedhamutti Tibbana Ummata Oromoo irratti raawwatame waan tasa ta’e osoo hin taane - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAjjeechaan Suukkanneessan Godina Matakkal Aanaa Dibaat jedhamutti Tibbana Ummata Oromoo irratti raawwatame waan tasa ta’e osoo hin taane
ODUU IJOO (SAD 16, 2020)
Ajjeechaan Suukkanneessan Godina Matakkal Aanaa Dibaat jedhamutti Tibbana Ummata Oromoo irratti raawwatame waan tasa ta’e osoo hin taane kan itti yaadamee raawwatameedha jedhan jiraattonni.
Ajjeechaan kun Sambata xiqqaa darbee Sadaasa 14/2020 gara bariitti namoota Konkolaataadhaan imalaa turan irratti gara jabeenyaan raawwatame kan jedhan jiraattonni naannichaa, maatii tokko keessaa Namoonni 6 ta’an haala suukkanneessaan ajjeefamaniiru jedhan.
Gocha kana kan raawwatan hidhattoota Saba Gumuz irraa akka ta’an himuun, taatee kana keessaa Hooggantoonni murna humnaan biyya bulchaa jirus dursaanii osoo quba qaban Ummata keenya ficcisiisaa jiru jechuun jiraattonni Matakkal irraa yaada isaanii OMN’f laatan komii qaban ibsaniiru.
Ajjeechaa raawwatame kanaan lubbuun Oromoota 46 darbuu himan jiraattonni odeeffanne.
Gochi kun daraanu kan hammaate erga gaafa Itti Aanaan Muummicha Ministiraa Dammaqee Mokkoniin sabni Amaaraa hidhachuu qaba jechuun dubbateeti kaasee milishaa fi hidhattoonni Gumuz kunneen Nama Gogaan isaa diimaa fi magaala ta’e kamiinu irratti tarkaanfii fudhachaa jiru jedhan.
Dhumarratti jiraataan Matakkal kun dhaamsa Miidiyaalee biyyattiitiif dabarseen Sanyii fi saba filtanii boohuu dhiisaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa hunda ija tokkoon ilaalaa jechuun dhaameera.
Ajjeechaa Matakkal keessatti Oromoo irratti tahe kanaaf kallattiin kan itti gaafatamu Dammaqaa Mokonnin fi murna isaa Bilxiginnaa dha jechuun kanneen dhimmicha hordofaa jiran yaada kennaa jiru.
Ummanni Oromoo guutummaan guututti socho’ee Murna humnaan biyya bulchaa jiru kana hundeen buqqisuu qaba, akkasumas caasaa isaa jalaa hamma gubbaa jiran mara diiguu qaba jedhan Qeerroon Maagaalaa Asallaa. Murni kun isa kaleessaa Qeerroo Oromoo Rasaasaan ajjeesaa baheedha, kanaaf Ummanni Oromoo yeroo kennuufii osoo hin taane, fincila addaan hin cinne gaggeessee Mirga Abbaa biyyummaa ofii gonfachuu qaba jedhan Qeerroon Asallaa yaada isaanii OMN’iif laatan.
Biyyattiin Waraana waliin waliinii gaggeessaa jirtu kana keessatti tooftaa tolfachuun Ummata Oromoo cabsuuf waan akeekkatameef Oromoon of dagatee rafee buluu hin qabu kan jedhan Qeerroon Asallaa, Wayta Waraanni Oromiyaa gadi lakkissee kaaba biyyattiitti adeemaa jiru kanatti Ummanni Oromoo murna Sirna Nafxanyaa gad dhaabaa jiru kana fonqochuu qaba jedhan.
Itti dabaluun Kaayyoon Lola kanaa fedhii nama dhuunfaa tokko hojiirra oolchuuf gaggeeffamaa kan jiru tahuu eeruun, kana keessatti Oromoon meeshaa waraanaa hidhatan dhimma nama dhuunfaaf loluu dhiisee Ummata ofii bira Yeroon dhaabbatan amma tahuu dubbatan. Murni abbaa irree humnaan biyyattii dhuunfatee bulchaa jiru tibbana lola ummata tigraay irratti bane sababeeffachuun waraana isaa oromiyaa keessatti ummata Oromoo fixuun dararaa ture funaanee gara tigraayitti geessaa jiraachuun gabaafame.
Ummanni Oromoo carraa kanatti fayyadamee tokkummaadhaan ka’ee qabsoo finiinsuun Murna kana hundeen buqqisee caasaa isaa gandoota kaasee hanga Gubbaa jiran hunda diiguu qaba jedhan Qeerroon Maagaalaa finfinnee irraa dubbifne. Kaabinoonni Aanaa fi caasaan gadi jiran martinuu sodaa guddaa keessa galanii waan jiraniif, kanaaf isaan kanneen irraa fagaachuu osoon taane itti dhiyaannee tooftaadhaan akka isaan gara ummata isaaniitti dhiyaachuun wajjiin ka’an gochuun sansalata murna kanaa kukkutu qabna jedhan.
Yeroo kanatti fayyadamuun qeerroon oromoo fi ummnni oromoo
Hoggantoota siyaasa keenyaa kanneen saba isaaniitiif jecha jireenya isaanii dhiisanii mana hidhaatti dhukkubsatanii rakkachaa jiran kanneen akka Jawar Mohammad Baqqalaa Garbaa faa fincila guddaa gaggeessinee yoo harka diinaatii baafachuu baanne cancalli ukkaamsaa nurratti hammaataa buluun shakkii hin qabu jedhan Qeerroon Shaggar kun.
Kanaafuu ummanni keenya kan dur caalaa jabaachuun qeerroo cinaa hiriiree hojiidhaan waan tokko agarsiifnee hidhamtoota keenya baraaruudhaan mootummaa mataa keenyaa Oromiyaa keessatti gad dhaabbachuu qabnaas jedhanii jiru.
Ummanni Oromoo osoo hayyoonni fi hooggantoonni isaa badii tokkoon maletti mana hidhaatti dararamaa jiran deebi’anii manatti galuu hin qaban bakka tokkotti wal dhageettiin bahanii falmachuu qaban jechuun Qeerroowwan Nageellee Booranaa yaada isaanii bilbilaan OMN’f laataniin.
Qeerrowwan keessa namni bilbilaan dubbifne tokko akka jedhutti yeroo Mootummaan bilxiginnaa fi TPLF ol aantummaa isaanii walitti garsiisuuf jecha waraana walitti banan kan ummanni oromoo ammoo caasaalee gandaa fi Aanaa kan mootummaa abbaa irree kana utubee ummata keenya hiraarsutti jiru of harkatti galfachuun qe’ee ofii dhuunfachuutu irraa eegama jedhan.
Caasaaleen amma jiru kama yeroo mootummaa tplf sana ummata keennaa darara turanituu ammallee gandarraa hanga Godinaatti ummata keenna dararaa jira kan jedhu maddi keenna kun gufuu qabsoo ummata oromoo warreen tahaniif warreen gabrummaan ummata oromoo irraa akka baanee taasisaniif taasisaa jiran keessaa tokko caasaalee gandaa tahuu Qeerroon dubbifne kun yaadachiiseera.
Abdiin Hoogantootaa fi Hayyoota keenna kanneen mana hidhaa osoo isaan hin daangesin mirga saba isaatiif falmataa jiran kan dhugoomsuuf umanni orommo qabsoo Oromiyaa dhuunfannaa irratti fuullefachuun sirna abbaa irree kan of irraa buusuu qaba jechuunis Qeerroon Nageellee Booranaa irraa dubbifne dabalee dubbatee jira.
Godina Walloo Aanaa Baatee keessatti hidhaa fi dararaan Ummata nagayaa irratti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jiraachuu maddeen keenya garasii dubbifne Ifoomsan.
Godinicha keessatti haalli nageenyaa daran hammaachuun wal-qabatee bobbaanee galuuf sodaa cimaa keessa jirra jedhan Jiraattoota jidduu kanneen OMN’iif yaada isaanii laatan.
Torbaan dabre keessa liyyuu poolisiin naannoo Amaaraa fi poolisiin dililee waliin ta’uun miidhaa kan dhaqqansiisan yoo tahu, ammas taanaan rakkoon nageenyaa godinicha jiru kan hin furamin tahuu dubbattu jiraattoonni.
Lola kaaba biyyaattii irratti gaggeeffamaa jiru kanaan wal-qabatee keessumattuu Oromoota Walloo irraa Oromoon naannoo Oromiyaa keessa jiraatan Ija ofii libsachuu hin qabu jedhan.
Akkuma Oromoota Matakkal irratti duulli duguuggaa sanyii gaggeeffamaa jiru wallottis mudachuutu mala kan jedhan Qeerroon Walloo OMN bilbilaan dubbise, Ummanni Oromoon Qe’ee fi daangaa isaa qalbiidhaan tochuun barbaachisaa tahuu dhaaman.
Godina wallaagaa Bahaa Aanaa diggaatti hidhaa fi doorsifni murna Abbaa irreetiin hawaasa nagaha irraan gahaa jiru haalaan haammaacha dhufe jechuun maddi keenna bilbilaan OMN’tti himan
Miseensota KFO fi ABO kanneen tahan hunda isaaniituu fuudhanii hidhatti darbatanii jiru kan jedhu namni bilbilaan dubbifne kun qarshi qabaa paartii KFO kan tahe obbo Dasaalenyi Moosisaatis sababa ilmi kee shaneedha jedhuun marsaa lammaaffaf qabanii mana hidhaa keessatti dararaa jiran jechuunis jiraataa gamasii dubbifne kun nuuf eeree jira.
Osoo hayyootaa fi Hooggantoonnii keenna mana hidhaatitti dararama jiran kaadireen bilxiginnaa immo rakko mataa isaaniitiif jecha gaafii fi fedhii ummata Oromoo ejjechuun hiriira deeggarsaa nuuf bahaa jettee hawaasa rakkisaa jiraachuu kan ibse Qeerroon dubbifne kun, Hawaasni naannichaa gama isaatiin hanga Hooggantoota keenyaa mana hidhaatirraa nuuf bahanitti deegarsi nut isiniif goonuu wayiituu hin jiru jechuun akka dura dhaabbatan dabalee addeessee jira.
Gochi Bilxiginnaan Gandoota fi Magaalota Oromiyaa gara garaa keessa naannawuun dirqamaan deeggarsa Maallaqaa fi Sangaa qalmaa Raayyaa ittisaa biyyaatiif gumaachaa jechuun hawaasa doorsisuun kufaatii jaraa agarsiisa jedhan Qeerroon Amboo.
Waytii gocha kana godhan waan ummanni isaanii wajjiin jiru haa fakkeeffatanii malee ummanni nama isa ajjeesuu fi hidhee reebu sangaan hin gabbaru warruma isaan jala fiigan walitti qabanii namootaan gowwoomsu malee kan jedhu qeerroon Amboo kun, Namoota harka qalleeyyii gandoota Baadiyyaa fi kanneen sabaan oromoo hin ta’in magaalaa irraa walitti qabanii walgahii jedhanii burjaajessaa jiru jedha.
Guyyaa kaleessaa hiriira deeggarsaa jedhanii Magaalaa Amboo keessatti kan yaaman deeggartoota isaanii irraa kan hafe oromoon sabboontonni tokkollee kan irratti hin argamin tahuu himuun,
Kadireen sirnichaa Qaanfii tokko malee akka kadhattuutti magaalaa keessa deemanii abbootii qabeenyaatiin birrii fidaa jedhanii ummata dararaa oolanii jedha.
Sirni kun Ummataa nagayaa ajjeesuu,saamuu, reebuu fi hidhuudhaan bulchuuf abbaa irrummaa isaa mirkaneeffatee waan jiruuf kana ummanni oromoo taa’ee ilaaluu osoo hin taane xiqqaaf guddaan sosso’ee murna kana ofirraa kaasuun hidhamtoota siyaasaa mana hidhaarraa baasuu qabaa jechuun dhaamsa dabarfate.